အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 10, 2015 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2022 Douglas Karr
ယခုအပတ်တွင်အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်သူတို့၏အီးမေးလ်စနစ်ကိုပြည်တွင်း၌တည်ဆောက်ရန်စဉ်းစားနေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကကျွန်ုပ်အားကောင်းသောအကြံအစည်ရှိပါကငါ့ကိုမေးပါကကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ အချိန်ကောင်းများပြောင်းသွားပြီးသင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်သိပါက ESPs ၏နည်းပညာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တော်တော်လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ CircuPress တီထွင်ခဲ့တယ်။
အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတွေကဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီလဲ။
ESP များနှင့်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာရနိုင်မှုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာ ESPs မဟုတ်ဘဲ ISPs ပဲ။ အဓိက ESPs ရှိအီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်သူများသည်ပြootနာများဖြေရှင်းရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောပို့ဆောင်ပေးမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ISP များသည်ထိုရုံးများကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးပေးပို့သူ၏ဂုဏ်သတင်းကိုစစ်ဆေးရန်၊ အကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ အီးမေးလ်ကိုပိတ်ဆို့ရန်သို့မဟုတ်လက်ခံရန်နှင့်၎င်းကို SPAM ဖိုဒါများသို့မဟုတ်အ ၀ င်ဘောက်စ်သို့ပို့ရန်အယ်လ်ဂိုရီသမ်မစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပေးပို့ရခြင်းသည် ဝင်စာပုံးထဲသို့ မရောက်ကြောင်း သတိပြုပါ။ သင့်အီးမေးလ်များ၏ 100% သည် Junk Folder သို့သွားနိုင်ပြီး ၎င်းသည် 100% ပေးပို့နိုင်မှုနှင့် ညီမျှသည်။ သင် ESP ကိုအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ မသုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ သင်လုပ်နေသည်ကိုသိပါက ဝင်စာပုံးသို့ရောက်ရှိရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးကို မပေးစွမ်းနိုင်ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် မင်းကို အသုံးချရမှာ Inbox နေရာချထားမှု စောင့်ကြည့်ရေးပလပ်ဖောင်း။
သတိပညာရှိဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါသည် အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ သငျသညျသော်လည်း, ပြည်တွင်းရေး redevelop ရန်ဆန္ဒရှိမပြုစေခြင်းငှါကမ်းလှမ်း။ သငျသညျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်မှအကဲဖြတ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်တစ်လကိုသိန်းနဲ့ချီတဲ့အီးမေးလ်တွေစပို့တဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်ကိုတီထွင်ချင်လာလိမ့်မယ်။
အရှိန် - အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင်သန်းပေါင်းများစွာသောအီးမေးလ်များကိုပို့ပါကကုမ္ပဏီ၏အခြေခံအဆောက်အအုံကိုဖွံ့ဖြိုးစေသည် Salesforce စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိမ်တိုက် ဖြစ်ကောင်းဘယ်တော့မှအဓိပ္ပာယ်လုပ်မယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်မျက်လုံးမခတ်ဘဲဘီလီယံနှင့်ချီသောအီးမေးလ်များကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
ကျွမ်းကျင်မှု - သင့်တွင်ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ထမ်းများမရှိလျှင်သင်၏အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်မဟာဗျူဟာများချမှတ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်လက်ဆွဲကိုင်စရာမလိုလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်ကိုမတည်ဆောက်လိုပါ။ သငျသညျကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပေမည် Delivra အဘယ်သူသည်စိတ်ကူးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေး။
bounce စီမံခန့်ခွဲမှု - အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းသည်အီးမေးလ်ပို့သကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိသည် အီးမေးလ်များအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက် နှင့်သင်အီးမေးလ်ပြန်ပို့ရန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လက်ခံရရှိသူစာရင်းသွင်းသူပယ်ဖျက်ရန်များအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ရှိသည်။
SPAM ဥပဒေလိုက်နာမှု - ရှိပါတယ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေများ စီးပွားဖြစ်တောင်းနိုင်ခြင်းအတွက်အီးမေးလ်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ သင်လိုက်နာမှုရှိခြင်းသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကိုသက်သာစေသည်။
ပုံစံ - သင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသလား တုံ့ပြန်တတ်သော အီးမေးလ်တင်းပလိတ်များ သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများ? ဒါမှမဟုတ်ဒီဇိုင်းဆွဲဆွဲချဖို့လိုပါသလား။ သို့မဟုတ်သင်၏အီးမေးလ်တွင်အဆင့်မြင့်သောအကြောင်းအရာများနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းပေါင်းစည်းမှုများလိုအပ်ပါသလား။ သင်၏ ESP တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်များကိုစနစ်တကျနှင့်မှန်ကန်စွာပို့ရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့်စွမ်းရည်များသေချာစေရန်သင်လိုချင်လိမ့်မည်။
စာရင်းပေးသွင်းသူစီမံခန့်ခွဲမှု - အကြောင်းအရာ ဦး စားပေးမှုများ၊ စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်ပုံစံများနှင့်စာရင်းပေးသွင်းထားခြင်းမရှိသောစင်တာများသည်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများ၏အီးမေးလ်ကိုရယူရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
API ကို - ESP ပြင်ပရှိစာရင်းသွင်းသူများ၊ စာရင်းများ၊ ကွန်နက်များနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုသင်စီမံလိုပါသလား။ တစ် ဦး ကကြံ့ခိုင် API ကို အရေးပါသည်။
တတိယပါတီပေါင်းစည်းမှု - သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တင့်မျှတသောပေါင်းစည်းမှုများကိုလိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည်။ဤတွင် CircuPress ၌ WordPress ဖြင့်တွေ့ရသည်), ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း, E-Commerce ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်အခြားစနစ်။
သတင်းပို့ခြင်း - ကလစ်နှိပ်မှတဆင့်နှုန်းထားများ၊ A / B စမ်းသပ်ခြင်း, စာရင်း retention ကိုအပြောင်းအလဲခြေရာခံခြင်းနှင့်အပြည့်အစုံတင်ပြသည့်အခြားကြံ့ခိုင်သောအစီရင်ခံစာများ အီးမေးလ်မက်ထရစ် သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ESP တစ်ခုချင်းစီ၏အင်္ဂါရပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်သေချာစေပါ။
နှင့်သင်တန်း၏, စျေးနှုန်းသော့ချက်ပါ! သေးငယ်သည့် ESP များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးကွက်ရှိထိပ်တန်းအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအကြားထူးခြားချက်များကြီးကြီးမားမားကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်ပါ။ သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးကြီးသောအထက်ပါအချက်များကိုသင်ကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်လျှင်စျေးနှုန်း ၀ ယ်ခြင်းကအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သန်းနှင့်ချီသောအီးမေးလ်များကိုပေးပို့လျှင်၎င်းသည်တတိယပါတီနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်ပင်အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်သည် ပို့ဂရစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကိုပင်တည်ဆောက်ပါ။
Tags: 250okspam လုပ်နိုင်သည်တီးဝိုင်းအီးမေးလ် apiအီးမေးလ်ကို bounce စီမံခန့်ခွဲမှုအီးမေးလ်ဒီဇိုင်းအီးမေးလ်ကျွမ်းကျင်မှုအီးမေးလ်အီးမေးလ်ပေါင်းစည်းမှုအီးမေးလ်ပို့မြန်နှုန်းအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးအီးမေးလ် spam လိုက်နာမှုအီးမေးလ်ပေးသွင်းသူစီမံခန့်ခွဲမှုအီးမေးလ်ESPဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့spam ဆိုင်ရာဥပဒေစာရင်းပေးသွင်းထားသူစီမံခန့်ခွဲမှု
ပန်းသီးကို Apple သစ်ပင်များနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါသတိထားပါ